Global Voices teny Malagasy » Rosia: Nahoana Isika No Mandao Ny Firenentsika? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Oktobra 2011 5:07 GMT 1	 · Mpanoratra Dmitry Davidov Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Efa hita an-jato taona mahery tany io olan'ny fifindra-monina faobe eo amin'ny Rosiana io. Fahizay, onjam-pifindra-monina maro  no nahatonga ny firenena ho tsy ampy mpiasa mahafeno ny fepetra ilaina, olona mpahay siansa sy mpanoratra ihany koa. Nanomboka teo dia tsy nisy fiatoana ny fifindra-monina avy any Rosia. Na teo aza ny fihatsaran'ny toe-karena to ho ato, dia mbola maro hatrany ireo Rosiana no mbola manonofy handao ny taniny.
Pasipaoro voatomboka. Sary nalaina tao amin'ny Flickr an'i Sem Paradeiro (CC BY-NC 2.0).
Nitatitra  [ru] ny gazety Rosiana Novaya gazeta fa araka ny tarehimarika farany teo, dia 22 isan-jaton’ ireo olon-dehibe (indrindra indrindra fa ireo mpandraraha sy ny mpianatra) no naneho ny faniriany handao tanteraka an'i Rosia. Nanome “tarehimarika ofisialy” ihany koa ny mpanao gazety: 1.3 ny mpandalina ny ara-tsiansa sy ny injeniera izay nandao ny taniny “tato anatin'ireo taona faramparany teo.”
“Rosia no ratsy”
“I Rosia no haratsiana amin'ny endriny hita vatana sy tsy mifangaro,” hoy ny voalohan-tenin'ny lahatsoratra am-bilaogy nosoratana mpanoratra Rosiana fanta-daza iray, ary mpitsoa-ponenana kosa ankehitriny dia Yuri Nesternko, izay nahazo fialonkalofana ara-politika any Etazonia. Nanohina ny fon'ireo Rosiana maro mpitoraka bilaogy ilay lahatsoratra izay manana ny lazany ankehitriny  [ru] nosoratan'i Nesterenko tamin'ny faran'ny taona 2010, nampitondrainy ny lohateny hoe “Exodus”.
Vetivety monja ilay izy dia lasa lahatsoratra tsy azo ihodivirana na ho an'ireo mpomba, na ho an'ireo mpanohitra ny fifindra-monina, ilay lahatsoratr'i Nesterenko dia kiakam-katezeran'ny olona iray nikasa ny hipetraka tao Rosia nefa tena tsy nahazaka mihitsy ny zava-misy, anisan'ireo mpamaky ireo ny olona manaiky sy mandà ny fifindra-monina.
Nanome lanja lehibe ny toe-tsain'ny Rosiana i Nesterenkoary. Nanambara izy fa nanakana, manakana ary mbola hanakana ny fivoaran'ny firenena izy io.
Nanakiana ireo Rosiana namany i Nesterenko noho izy ireo namolavola mpitantana mpandika lalàna foana teo amin'ny tantara: “tsy avy any amin'ny planeta Mars akory izy ireo,” hoy izy, milaza fa tsy misy azo antenaina i Rosia sy ny mponina ao aminy. Nolaviny avokoa ireo hevitra naroso izay manohana ny fitiavan-tanindrazan'ny Rosiana ary mamporisika ny fifindra-monina faobe:
Tsy ZAVATRA mila avotana akory i Rosia fa zavatra iray ilain'ny tsirairay ialàna hanavotany ny tenany. [Mila] manavotra ny tsirairay avy izay mbola azo avotana isika ary tsara atomboka amin'ny tenantsika tsirairay avy izany. Noho izany, ny fifindra-monina no hany làlana hahatontosana izany. Mila ajanontsika hatreo ny fanimbàna ny fiainanantsika sy ny fanolorana izany ho toy ny zezika ho an'ireo Rosiana ratsy fanahy, izay tsy hamokarany na inona na inona afatsy ireny voninkazo feno tsilo ireny fotsiny.
Mba hanohanana ny fomba fijeriny izay manambara hoe tsy hisy zavatra tsara mihitsy hitranga ao Rosia, dia nanoratra mikasika ny tsy firaikàn'ny Rosiana manoloana ny sarintsarim-pahalalahana iainan'ny firenena amin'izao fotoana i Nesterenko:
Tsy latsaky ny ampahatelon'ny Rosiana no mampiasa aterineto […]. Ahoana ny ampiasan'izy ireo an'izany? Ny amenoan'izy ireo ny sehatra fifanakalozan-dresaka ara-politika dia ny fankahalàny ny Tandrefana, Georgia, Okraina, “demshiza” [fanafoizan-teny ampiasainy hamaritana ny hetsika ataon'ny mpomba ny demokrasia izay nalaina tamin'ny teny hoe “demokrasia” sy “schizophrenia”] ary mazava ho azy, ny hoe Jiosy […], fahatsiarovana ny Sovok [Firaisana Sovietika] ary kabary fanidrahindràna an'i Stalin. Tsy voasompantsompatra ireo foiben'onjam-peo Tandrefana , nefa iza moa no mba mihaino azy ireny? Satria fampielezam-peo “fahavalo” izy ireo ary mpankahala ny Rosiana […].hatrany.[…]
“Zavatra iray monja no fantatro,” hoy i Nesterenko namarana, “Tsy hiverina any Rosia mihitsy aho. Ary am-pifaliana no ilazako ankehitriny fa tsy ‘firenentsika’ […] fotsiny izy io.’ Manomboka eto ary mandrakizay dia lasa hoe ‘io firenena io.”.
Ny anton'ny fifindra-monina
Mamaritra ny tenany ho “tovovavy tanora 25 taona maniry ny handao io firenena io” ilay mpitoraka blaogy antsoina hoe Viktoria. Nanoratra lahatsoratra iray izy nampitondrainy ny lohateny hoe “Antony miisa sivy no handaozako an'i Rosia”  [ru] izay nahazoana “mpankafy” miisa 9,000 tao amin'ny Facebook, mpamaky miisa 8,000 tao amin'ny tambajotra sosialy Rosiana be mpahafantatra, Vkontakte.ru, ary miisa 1,400 ireo namerina nanao tweets tao amin'ny Twitter, mihoatra ny 2,000 ihany koa ny fanamarihana azo.
Araky ny ambaran'io lohateny io, navoitran'i Victoria ireo antony nandaozany an'i Rosia: ny tsy fahampian'ny fandriam-pahalemana, ny haratsian'ny fiahiana ny fahasalamana, ny fanabeazana tsy manara-penitra, ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao amin'ny resaka asa, ny halafosam-bidin'ny toeram-ponenana, ny fiparitahan'ny kolikoly, ny haratsian'ny zavatra vokarin'i Rosia, ny tsy fanajàna ny zo sy ny fahafahan'ny vahoaka ary – ny zavatra manan-danja lehibe indrindra ho an'i Viktoria -dia ny toe-tsaina “tsy fanajana ny olon-kafa sy ny tsy fandeferana efa manakaikikaiky ny fasisma tsy refesi-mandidy.”
Alaivo an-tsaina segondra iray monja hoe misy zava-mitranga ary maty tampoka ao anatin'ny andro iray avokoa ny governemanta sy ny olo-manan-kaja rehetra. Inona no hitranga ao anatin'ny herinandro, na ao anatin'ny iray volana? Mbola endrika toy ireo ihany no ho hita eo amin'io toerana io. Nahoana? Satria tsy miova ny olombelona. Ary nohon'ny antony tsy fantatro, dia tahaka izany ny vahoakantsika.
Hoy i Victoria: “Afaka milaza ianao hoe mila miady ho amin'ny fahasambarako aho, miady ho amin'ny ho aviko mamirapiratra,”. “Miala tsiny ry namako, fa tsy mpitolona aho, mpandrindra ‘système’ (administrateur système) saro-kenatra aho. Tsy maniry ho avy mamirapiratra aho, ny anio no iriako hilamina.”
Tsy tokony handeha ianao
Nandritry ny fivadibadihan'ny onjan'ny fifanakalozan-dresaka momba ny fifindra-monina teo amin'ny aterineto Rosiana, nanoratra lahatsoratra somary mampiseho fiahiahiana  ilay mpitoraka bilaogy iray armyan-capitan [ru] mikasika ny hoe nahoana no tsy mieritreritra ny hifindra monina mihitsy ny olona maro. Hoy i armyan-capitan hoe: ny toe-tsaina no tena antony:
Aza manao izay hampihomehy ahy ianao. Niaritra 10 taona ny raibenao raha nosamborina ry zareo ary tsy nety nifindra monina eny na dia hankany amin'ny tanàna akaiky azy aza. Ary raha nalefa tany Kolyma  [en] [faritra ao Siberia fanta-daza amin'ny tobiny antsoina hoe Gulag ] aza izy ireo, dia niandry famelankeloka faobe teo am-pitsindrohana sakafo tany anaty fakon'ny fonja. Nefa tsy “biby fiompy” izy ireo fa olo-manan-kaja, mpitondra fanjakàna tao amin'ny governemanta sy manampahaizana matsilo saina … Fa ireo zafikeliny no lasa “biby fiompy” Mpitandro ny filaminana matavy be, mpiasa birao fotsy vozon'akanjo ary foloalindahy mpisava làlan'i Putin. Tsy hifindra monina na aiza na aiza ianao. Ary izany dia tsy noho ny tsy fananam-bola
Mbola nitanisa antony roa hafa koa io mpitoraka blaogy io mikasika ny antony tsy nandehanan'ireo nanam-pikasana hifindra monina: ny olana misy eo amin'ny fahazoana taratasy fifindra-monina sy ny fahasahiranana eo amin'ny fanarahana kolotsaina vaovao:
Tsy vitanao ny hipetraka ao amin'ny firenena iray ka ny lalàna no manjaka ao fa tsy ny VOLA. Tsy ho takatrao mihitsy izany. Efa tarazo manaranaka. Tsy afaka hiara-hiaina amin'ireo olona manara-penitra ireo ianao raha mbola miaraka amin'ny fankahalana tsy hita faritra. Tsy hahafantatra anao mihitsy izy ireo ary tsy handray anao koa. Ho tsapanao avy hatrany izany rehefa hiala eto ianao ary tsy hipetraka amin'ny hotely ahafahanao misotro labiera maimaimpoana efa tafiditra ao anatin'ny sarany
Ny lazan'ireo lahatsoratra am-bilaogy ireo eo amin'ny aterineto Rosiana dia maneho fa liana amin'io lohahevitra io ny olona maro. Mari-pamantarana koa izany fa maro ireo mponin'ny aterineto no tsy afa-po amin'ny zava-misy ao Rosia amin'izao fotoana.
Nanao tatitra  ny sampan-draharaha Rosiana mpanao fitsapan-kevitra, Levada-Center [ru], fa vitsy dia vitsy ireo Rosiana no mieritreritra hoe mizotra amin'ny làlana tena izy ny fireneny. Mihamihena tsikelikely ny isan'ny mponina izay mankato ny asa ataon'ny governemanta.
Mety ho lasibatra mora tondroina ho fositry ny olana maro eo amin'io firenena io ny toe-tsaina ary ny fifindra-monina no toa vahaolana haingana dia haingana ho an'ny tanora maro an'isa. Nefa ny fanekena “ny voka-dratsy ateraky ny toe-tsaina” eo amin'ny Rosiana dia mety ho isan'ny dingana kely niteraka fiovàna nandritry ny zato taona nileferana am-pahanginana teo anatrehan'ireo mpitondra fanjakàna mpanao didy jadona sy mpanao kolikoly ao amin'ny governemanta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/19/22092/
 Fahizay, onjam-pifindra-monina maro: http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Australians#Waves_of_emigration
 Nitatitra : http://www.novayagazeta.ru/data/2011/074/22.html
 lahatsoratra izay manana ny lazany ankehitriny: http://yun.complife.ru/miscell/exodus.htm
 “Antony miisa sivy no handaozako an'i Rosia”: http://www.gazeta.ru/realty/2011/08/17_e_3735725.shtml
 lahatsoratra somary mampiseho fiahiahiana: http://armyan-capitan.livejournal.com/1006.html
 Nanao tatitra: http://www.levada.ru/press/2011082502.html